ကြံ့ဖွံ့ အစိုးရမှ စေလွှတ်ထားသော RSO(Rohingya Soliderity Organization) အမည်ခံ အယောင်ဆောင် လူတစ်စုမှ လူအသေအပျောက်များနိုင်သော အကြမ်းဖက်ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုများ နေရာအနှံ့ အပြားတွင် ဖြစ်ပေါ်လာတော့မည် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Hatred as politics in Myanmar
To end terrorism by Muslims, end wars on Muslims: Siddiqui »
ကြံ့ဖွံ့ အစိုးရမှ စေလွှတ်ထားသော RSO(Rohingya Soliderity Organization) အမည်ခံ အယောင်ဆောင် လူတစ်စုမှ လူအသေအပျောက်များနိုင်သော အကြမ်းဖက်ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုများ နေရာအနှံ့ အပြားတွင် ဖြစ်ပေါ်လာတော့မည်
ကျုပ်မတင်ချင်ဘူး ဒါပေမဲ့ အားလုံးအတွက် တင်ပေးလိုက်တယ်….
အကြမ်းဖက်ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုများ နေရာအနှံ့ အပြားတွင် ဖြစ်ပေါ်လာတော့မည်)
<<<<<<<<<<မြန်မာနိုင်ငံကို အသက်ထက်ချစ်တယ်ဆိုရင် အဆုံးထိဖတ်ပြီး Share ပေးပါ>>>>>>>>>>
ကြံ့ဖွံ့ အစိုးရမှ စေလွှတ်ထားသော RSO(Rohingya Soliderity Organization) အမည်ခံအယောင်ဆောင် လူတစ်စုမှ မကြာမီအချိန်အတွင်း ရန်ကုန်မြို့ အပါအ၀င်မြို့ ကြီးအချို့ တို့ တွင် လူအသေအပျောက်များနိုင်သော အကြမ်းဖက်ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မည့် အစီအစဉ်များစတင်လုပ်ဆောင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ခိုင်လုံစွာ သတင်းရရှိသည်။ ထိုအစီအစဉ်မှာ ဗိုလ်သန်းရွှေလက်ထက်ကတည်းကပင် စီမံရေးဆွဲထားခဲ့သော Plan များစွာထဲမှတစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်ကျမှ စတင်လုပ်ဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအစီအစဉ်အသေးစိတ်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဒေါက်တာနေဇင်လတ်မှပြင်ဆင်မွမ်းမံကာ အသစ်ထပ်မံရေးဆွဲခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အစီအစဉ်တွင် အကြမ်းဖက်လုပ်ဆောင်မည့်နေရာများမှာ လူစည်ကားရာဈေးများ၊ ဘတ်စ်ကားများ၊ မီးရထားနေရာများနှင့် ဘုရားရင်ပြင်တော်အထိပါဝင်ပြီး လူအသေအပျောက်ရှိစေရန် စီစဉ်ထားသည်ဟုသိရသည်။ ထို့ ပြင်လိုအပ်ပါက အစိုးရဌာနများ၊ ရုံးအဆောက်အအုံများနှင့် လ၀က၀န်ကြီးဌာနအပါအ၀င် အစိုးရအရာရှိများကိုပါ စတေးမည်ဟု သိရပါသည်။ အကြမ်းဖက်မည့်သူများကို ကြံ့ဖွံ့ စစ်အစိုးရမှလွန်ခဲ့သော ၂နှစ်ခန့် ကပင် စတင်လေ့ကျင့်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ သူတို့ ၏လက်သပ်မွေးမြူထားသော ဘင်္ဂါလီများ၊ ကုလားရုပ်ဆင်သူများ၊ စွမ်းအားရှင်များအစရှိသဖြင့် ပါဝင်ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
RSO ကိစ္စကို တကယ်ရှိသယောင်ယောင်ဖြင့် အစိုးရနှင့်လက်ဝါးရိုက်ထားသော မီဒီယာများကစတင်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ဘင်္ဂလီများကို လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်သမားအဖြစ်အစိုးရပုံဖော်မှသာနိုင်ငံတကာဖိအားပေးသည့် ဘင်္ဂလီနိုင်ငံသားပေးရေးကိုငြင်းပယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင် အစိုးရနှင့်အပေးအယူရှိသည့် မီဒီယာတစ်ခုမှ စတင်၍ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားသုံးယောက် အကြမ်းဖက်မှုများပြုလုပ်ရန်မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်စဉ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၌ ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့ နောက် ရခိုင်ပြည်နယ်ဒူချီရာတန်းမှာဖြစ်သည့်အကြမ်းဖက်မှုတွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဘင်္ဂလီRSOတွေက ရဲတပ်ကြပ်ကြီးကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားကာ ၄င်းတို့ ကိုယ်တိုင်အသက်သွင်းထားသော RSOခေါင်းကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပုံချခဲ့သည်။ ထို့ နောက်တွင် ယခင်ကတည်းကကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့်သတင်းဖြစ်သော ပါကစ္စတန်အကြမ်းဖက်သမားသုံးယောက်ကိစ္စကို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် RSOနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ပြသနာကို တင်ဆက်နေစဉ် အစိုးရပိုင် SkyNet ရုပ်သံ၏ UpToDate ချယ်နယ်မှ အခြေအမြစ်မရှိသောသတင်းဖြစ်သည့် “အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားက RSOအဖွဲ့ အရေးနဲ့ ပက်သတ်ပြီးအထူးစိုးရိမ်နေတယ်” ဆိုတဲ့စာတမ်းကို တစ်ချိန်လုံးထိုးခဲ့ပါသည်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင် အစိုးရကျောထောက်နောက်ခံမီဒီယာများကလည်း RSO ကိစ္စကိုအချိန်ကိုက်ဖွပေးခဲ့ကြသည်။ မထင်မှတ်လောက်အောင်ပင် သူရိယနေ၀န်းဂျာနယ်မှလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များမုန်းတီးလာစေရန် မဖြစ်နိုင်သောဆက်စပ်မှု ဖြစ်သည့် ဗာမီယန်ရုပ်ထုဗုံးဖောက်ခွဲခဲ့သော အကြမ်းဖက်တာလီဘန်များနှင့် RSO ကိုချိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ တာလီဘန်အကြမ်းဖက်ကွန်ယက်သည် အာဖဂန်နှင့် ပါကစ္စတန်စသည့်နိုင်ငံများထိသာလက်တံရှည်ပါသည်။ သို့ သော်လည်း မြန်မာပြည်သူများနှင့် ရင်းနှီးစွာမုန်းတီးပြီးသားဖြစ်သည့် တာလီဘန်နှင့်ပိုမိုစေရန် လုပ်ပေးလိုက်ခြင်းသာဖြစ်သည်။
အင်မတန်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော ထိုအစီအစဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံစစ်တကောင်းမြို့အနီးတ၀ိုက်တွင်ပါအဖမ်းအဆီးပြမည်ဖြစ်ပြီးလူအချို့ ကိုဇန္န၀ါရီလဆန်းရက်များအတွင်းကပင် နယ်စပ်မှတဆင့်ကြိုတင် စေလွှတ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်စုံကော်အဖွဲ့ မှ ဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင်နှင့် နီးစပ်သည့်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သတင်းရရှိသည်။ အကြမ်းဖက်မှုအန္တရာယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကျရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ယုံကြည်လက်ခံလာစေရန်တာလီဘန်နှင့် ဆက်နွယ်ကာအကွက်ဆင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအစီအစဉ်ကိုဖြစ်မြောက်အောင် နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်ပေးနေသူများမှာ ဒေါ်“အောင်”ဆန်းစုကြည်ကို ချေမှုန်းရန် အောင်ဇေယျဖြစ်သည့် (ဦးအောင်မင်း၊ ဦးအောင်သောင်း၊ ဦးအောင်သိန်းလင်း) တို့ ပါဝင်ပတ်သတ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ ထိုလူများကို လေ့ကျင့်ပေးရာတွင် တာလီဘန်အကြမ်းဖက်သမားများနှင့်ဆင်တူအောင် မုတ်ဆိတ်ဖွားဖွားထားစေခြင်း၊ အင်္ကျီရှည်ဝတ်ရုံရှည်များ ၀တ်ဆင်စေခြင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှု့ နှင့်ဘာသာစကားကိုပါ တူညီစေရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားသည်ဟုသိရှိရသည်။
တစ်ချက်ခုတ်အချက်များစွာပြတ်စေမည့် ကြံ့ဖွံ့ အစိုးရ၏ထိုအစီအစဉ်အောင်မြင်သွားပါက ကြံ့ဖွံ့ အစိုးရအနေဖြင့် ၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပြိုင်ဘက်မရှိပဲ လွယ်လွယ်ကူကူ အောင်ပွဲဆင်နိုင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သော အချက်များမှာ-
၁) လူအသေအပျောက်ဖြစ်အောင် စီမံထားသဖြင့် ဒေါသထွက်နေသောလူထုကြားတွင် အစ္စလာမ်နှင့် ကုလားမုန်းတီးရေး စိတ်ဓါတ်များ ပိုမိုကြီးထွားလာနိုင်ပြီး ဗမာ-ဗုဒ္ဓဘာသာတယူသန်အစွန်းရောက်သမားများကို ပိုမိုများပြားအောင် မွေးထုတ်ပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်ကာ မိမိလိုချင်သော နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ထိရောက်အောင် (မဘသ) အကြောင်းပြ၍ အလွယ်တကူ ဆွဲခေါ်မောင်းနှင်သွားနိုင်ခြင်း၊
၂) ဒီမိုအင်အားစုများအကြားတွင် စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုများဖြစ်ပေါ်လာပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံးအကြမ်းဖက်မှုကိုသာ အာရုံစိုက်နေရသဖြင့် မည်သူ၏နောက်လိုက်ရမည်ကို ကွဲကွဲပြားပြားမသိနိုင်ခြင်း၊
၃) တာလီဘန်အဖွဲ့ နှင့်ပါဆက်စပ်အောင်လုပ်ဆောင်ပြနိုင်သဖြင့် ယခင်ကရန်ငြိုးရှိခဲ့သော ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးကြား ယုံကြည်အောင်အလွယ်တကူသွေးထိုးလှုံဆော်နိုင်သလို အစိုးရပြောသမျှလူထုကလည်း ယုံယုံကြည်ကြည်ခေါင်းငြိမ့် လက်ခံနိုင်ခြင်း၊
၄) ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အကြမ်းဖက်မှုအန္တရာယ်ကျရောက်နေကြောင်း နိုင်ငံတကာမှလက်ခံယုံကြည်လောက်အောင် ဆက်စပ်ပြနိုင်ခဲ့လျှင် နိုင်ငံတကာ၏ပိတ်ဆို့ အန္တရာယ်ကို ရှောင်ရှားပြီးဖြစ်သလို နိုင်ငံတကာ၏ အကူအညီအထောက်အပံ့ကိုလည်း ဆက်လက်အလွယ်တကူရနေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အားပေးထောက်ခံမှုကိုလည်း ဆက်လက်ရနေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
၅) တိုင်းရင်းသားများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများလည်း နှောင့်နှေးသွားနိုင်သလို တိုင်းရင်းသားများလက်နက်ကိုင်များသာမက မူဆလင်လက်နက်ကိုင်များကိုပါသုံးပွင့်ဆိုင်ရှိလာအောင်ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ပြီး ဖက်ဒရယ်ကိစ္စမှာလည်း နောက်ဆုတ်သွားနိုင်ခြင်း၊
၆) ပုဒ်မ၅၉ ပြင်ဆင်ရေးအပါအ၀င် ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးသည်လည်း အာရုံပြောင်းသွားနိုင်ခြင်း၊
၇) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးအရှိန်များ ရပ်တံ့လုနီးပါးဖြစ်သွားအောင် လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ခြင်း၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံးလူထုမှ အမေစုကို အာရုံမစိုက်နိုင်တော့ခြင်း၊
၈) အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ဘင်္ဂလီများကိုလည်း ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံသားပေးစရာမလိုတော့ပဲ ယခင်အတိုင်းပင်ဆက်ထားရှိသွား နိုင်သလို နိုင်ငံတကာ၏ ရိုဟင်ဂျာအပေါ်ထားရှိသော ဂရုဏာသက်မှုများသည်လည်း လျော့ကျသွားစေနိုင်ပါသည်။ မြန်မာအစိုးရအပေါ်တွင် နိုင်ငံတကာ၏ ဂရုဏာသက်မှုသည်လည်း ပိုလာနိုင်ပါသည်။ (ယခုအစီအစဉ်အရ ရိုဟင်ဂျားများကို တစ်သက်လုံးနိုင်ငံသားပေးတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ထားသည်ဟုသိရှိရသည်၊ ဧရာဝတီသတင်းဌာ၏ ဖော်ပြချက်အရ ဘင်္ဂလီ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ အခြေချစေပြီး မူဆလင်များအစား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို နိုင်ငံသားပေးကာ ကမ္ဘာကိုနိုင်ငံသားပေးပြီးကြောင်း အကြောင်းပြမည်ဖြစ်သည်ဟုသိရှိရသည်)
၉) ပြည်တွင်းနေမြန်မာမူဆလင်လူနည်းစုများသည်လည်း တသက်လုံးခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားပြီး အကြမ်းဖက်သမားအဖြစ်ကမ္ဘာကမြင်သွားနိုင်ခြင်း၊
၁၀) ထိုလုပ်ရပ်၏ယောင်ပြ တိုက်ကွက်မှာ လက်တစ်ဆုပ်စာမျှပင်မရှိသော RSOကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ ဖြစ်စေရန် အသက်သွင်းပေးကာ အဓိကတိုက်ကွက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာလျှင်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅တွင် အမေစုအာဏာမရရှိအောင်၊ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမပြင်ဆင်နိုင်အောင်၊ အစီအစဉ်ချထောင်ချောက်ဆင်ထားခြင်းသာလျှင် ဖြစ်ပေသည်။
၁၁) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် မွေး/ရေ၀န်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်ကိစ္စအား အစိုးရအနေဖြင့် အမြန်ဆုံးတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရန် အရေးတကြီးတင်သွင်းမှုအပေါ်တွင်လည်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက “ကျွန်တော်တို့ အချိန်အနည်းငယ်လိုချင်ပါတယ်”ဟု ပြည်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ အချိန်ဆွဲခဲ့ခြင်းမှာ အကြမ်းဖက်မှုများသာပေါ်ပေါက်လာပါက ဦးအုန်းမြင့်ကိစ္စမှာ မှေးမှိန်ပပျောက်သွားနိုင်သည်ကို သိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ (ဦးအုန်းမြင့်မှာ ဦးသန်းရွှေ၏ လက်ရုံးတပည့်ရင်းဖြစ်ရုံမက စီးပွားရေးများကို အဓိကကျားကန်ပေးနေရသူဖြစ်သည်)
ယခုဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ယင်းအကြမ်းဖက်မှုလမ်းကြောင်းရောက်အောင်ဦးတည်သွားချင်နေသည်မှာ ရုပ်လုံးပေါ်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဒေါ်စု၏ ခြေ/ဥပြုပြင်ရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းများရပ်တံ့စေရန် ကြံ့ဖွံ့ အကျိုးအတွက် မူဆလင်အကြမ်းဖက်သမားများနိုင်ငံအတွင်းတွင်ရှိစေချင်သည်။ ထင်ရှားသောသာဓကနှစ်ခုမှာ ဗိုလ်ပြုတ်ခင်ညွှန့် (သို့ မဟုတ်) စစ်အစိုးရကျောထောက်နောက်ခံပြု သူရိယနေ၀န်းဂျာနယ်မှ “RSO အကြမ်းဖက်သမားများကို တာလီဘန်အဖွဲ့ က လေ့ကျင့်ပေးခြင်း” သတင်းနှင့် ဧရာဝတီဘလော့ဂ်စာမျက်နှာထက်တွင် အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ဆက်စပ်လျက် “မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုး ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ဟု သမ္မတဦးသိန်းစိန်မှ လျှို့ ဝှက်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်”ကြောင်း သတင်းနှစ်ပုဒ်ပင်ဖြစ်ပါတော့သည်။ ထို့ အပြင် လွန်ခဲ့သည့် လအနည်းခန့် ကလည်း ပါကစ္စတန်အကြမ်းဖက်သမားသုံးယောက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင်ဖမ်းမိသည့် သတင်းနှင့် တပြိုင်နက် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ မှ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးသင်တန်းဆင်းပွဲကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သေးသည်ကို အမှတ်ရဦးမည်ထင်ပါသည်။
ထို့ အပြင်တိုက်ဆိုင်မှုများမဟုတ်သော ကြိုတင်အကွက်ချစီစဉ်မှုများဖြစ်သည့် မှော်ဘီလက်နက်တိုက်ဖောက်ခံရခြင်း၊ ရှမ်းပြည်ဘက်တွင် စနိုက်ပါအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းများသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ခြင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးရဲမြင့်ယာဉ်တန်း ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ RNDP ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးအေးသာအောင်တို့ မလေးရှားတွင် လုပ်ကြံပစ်ခတ်ခံရကြောင်းသတင်းအားတစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်ကြပါ။
စစ်တပ်အစောင့်အကြပ်ရှိသော မှော်ဘီလက်နက်တိုက်အကိုသာမန်လူတစ်ယောက်နေ့ ခင်းဖက်ဝင်ရောက်ဖောက်ထွင်းရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ မိတ္ထီလာအကြမ်းဖက်မှုတွင် မူဆလင်ကလေးငယ်များသတ်ခံရသည့်ကိစ္စတွင် ဦးရဲမြင့်၌တာဝန်ရှိသည့်အတွက် မူဆင်ကလုပ်ကြံသည်ဟု နောက်ပိုင်းသတင်းလွှင့်နိုင်ရန် လုပ်ကြံဗုံးခွဲခြင်း၊ ဒေါ်စုအားလုပ်ကြံရန်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်ကြေးများထွက်ပေါ်စေရန် စနိုက်ပါများဖမ်းဆီးရကြောင်း သတင်းလွှင့်ခြင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရခိုင်လူမျိုးခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကို မူဆလင်နိုင်ငံမလေးရှား၌ မူဆလင်များလုပ်ကြံသည်ဟု (ယခုလည်း အစ္စလာမ်အကြမ်းဖက်သမားများလုပ်ကြံရမှုမှလွတ်မြောက်လာသည်ကိုကြိုဆိုကြောင်း ပိုစတာများဖြင့် အစိုးရလူများက အကွက်ချကြိုဆိုခဲ့သည်) ထင်မှတ်မှားရအောင် ကိုယ်တိုင်အကွက်ကျစီစဉ်ထားခြင်းတို့ အားလုံးအား နောက်ဆုံးတွင် အစိုးရ၏ လက်သပ်မွေးထားသော RSO မှပြုလုပ်ကြောင်း တစ်ချီထဲ ခေါင်းပုံချတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်များကြောင့် ဒေါ်စုအနေဖြင့် လုံခြုံရေးအတွက် နယ်တကာလှည့်ကာ ဟောပြောပွဲ၊ စည်းရုံးရေးများ ပြုလုပ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေ။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက် တက်ကြွလှုပ်ရှားပြီး ဟောပြောပွဲများပြုလုပ်နေခြင်းကို တန်ပြန်သည့်အနေဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ရန် ကြံ့ဖွံ့ အစိုးရက အကျိုးစီးပွားကိုမျှော်ကိုးကာလုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ အင်အားကြီးစူပါပါဝါနှစ်နိုင်ငံအားပြိုင်သည့်ကြားထဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေ အယုတ်အလတ်မရွေး ဗမာ-ကုလား-တရုတ်မရွေး ဓါးစာခံဖြစ်နေပါပြီ။ မြန်မာပြည်သူတွေအနေနှင့် ကြံ့ဖွံ့ အစိုးရ၏နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်သည့်လှည့်ကွက်ထဲမ၀င်ပဲ လူမျိုးဘာသာမရွေးစည်းလုံးကြဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ စစ်အစိုးရ၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို ၈၈အရေးတော်ပုံတွင်မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရ၏ သွေးခွဲမှုကို နှလုံးရည်ဖြင့် ကြံ့ကြံ့ခံဖို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ စစ်အစိုးရကတော့ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ရေး၊ NLD အနိုင်မရရေးအတွက် ညစ်ညမ်းသည့်နည်းလမ်းအစုံကို အသုံးပြုမှာဖြစ်သည့်အတွက် လှည့်ကွက်ထဲမ၀င်ကြပါနဲ့ ။ မြန်မာပြည်သူတွေနိုးကြားဖို့ လိုအပ်ပြီ။
အရေးကြီးရင် သွေးစည်းကြစို့ ။ အရေးတော်ပုံအောင်ပါစေ၊ စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီအဓွန့် ရှည်ပါစေ။
ထလော့မြန်မာ.. အို.. မြန်မာ
This entry was posted on November 11, 2014 at 5:41 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
One Response to “ကြံ့ဖွံ့ အစိုးရမှ စေလွှတ်ထားသော RSO(Rohingya Soliderity Organization) အမည်ခံ အယောင်ဆောင် လူတစ်စုမှ လူအသေအပျောက်များနိုင်သော အကြမ်းဖက်ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုများ နေရာအနှံ့ အပြားတွင် ဖြစ်ပေါ်လာတော့မည်”
drkokogyi Says:	November 11, 2014 at 5:42 am | Reply U Aung Tin
ကုိုပါကြီးအလောင်းသယ်တဲ့ကိစ္စမှာ မုတ်ဆိပ်နဲ့ မွတ်စလင်တွေက ရှေ့နေဦးရောဘတ်စန်းအောင်ကုို ခြိမ်းချောက်ကြတယ်ဆုိုတာ မှတ်မိလား။ မွတ်စလင်အစစ်လုို ယောင်ဆောင်ထားပြီး ကုရ်အာန်အာယတ်တစ်ချို့ကုိုပါ သင်ယူလေ့ကျင့်ထားတဲ့ အဖျက်သမားတွေ ဝင်လာပြီး အကြမ်းဖက်ကြမယ်။ အဲဒါကုို အကြောင်းပြုပြီး မွတ်စလင်တွေကုို ဒုက္ခပေးလာမယ်။ အထူးသတိထားကြ။